Wiimote Controller, isticmaal fogaanta Wii si aad ugu ciyaarto Android kaaga | Androidsis
Waxaan ka qiyaasi karnaa wax kasta oo la arkay ilaa hadda fursadaha baaxadda leh ee uu bixiyo nidaamka hawlgalka sida uu yahay Android In kasta oo aan hubno in aan qiyaasno in yar, maanta waxaan kuu keenaynaa mid kale oo hubaal ah inuu aad waxtar u yeelan doono wakhtiga firaaqada.
Codsi ayaa ku jira Suuqa Android wac Wiimote Controller Sida aad ka qiyaasi karto magaca, waxay awood u leedahay isticmaalka kontoroolka fogaanta ee Wii si loo xakameeyo ciyaaraha qaar ee Android-kayaga.
Codsiga wuxuu ku shaqeeyaa iyada oo loo marayo isku xirnaanta Bluetooth ee qalabka iyo waxaan awoodnaa, sida aan ku aragno fiidiyowga, ku ciyaarno our Xarunta Android iyadoo la isticmaalayo fogaanta Wii, aad u raaxo badan oo fudud in la ciyaaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Wiimote Controller, u isticmaal Wii Remote si aad ugu ciyaarto Android-kaaga
Kuma shaqeyso rabitaan. Waxay ku siinaysaa qaladka 1, sida ku cad tilmaamaha codsiga
Ku jawaab cesisa
Looma baahna HTC Hero: S
si fiican, waxaan rabay inaan u isticmaalo rabitaanka ... grrr waxaan isku dayi doonaa marka ay i siiyaan.
U jawaab STNS
On the Nexus waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan.
Ma garanayo inay la shaqaynayso xperia mini pro, fadlan ka jawaab
Ku jawaab pepito
Hagaag, waxay iigu shaqeysaa rabitaan (rom waa miui)
hello halkan hab oo waxaad sidoo kale arki doontaa sida loo habeeyo kontoroolka wii si uu ugu ciyaaro super gnes snes emulator…!
Google Goggles hadda sidoo kale wuxuu tarjumayaa waxa ay noo baaraan